Wana kusagadzikana, tambanudzwa, zvishoma kwekanguva | Martech Zone
China, April 15, 2010 Chipiri, April 1, 2014 Steve Kremer
Iyi haisi yemufananidzo wemifananidzo. Ndiyo tsoka yangu pane hammock pamhenderekedzo muHonduras. Kwete sero, hapana laptop, hapana matambudziko mon.
Ini ndakatanga kuwana online ndikawana yangu yekutanga e-mail kero kutanga kwa1995. Mukupera '95 ini ndakaburitsa yangu Webhu dhizaini bhizinesi. Kuva nekambani yangu kwaireva kuve online uye kuwanikwa kune vatengi vangu nguva dzese. Ini ndaigara ndakavharirwa mukati. Kunyangwe pazororo ndauya neyangu ikozvino mazambiringa NEC laptop. Sezvo nguva yakafamba ndakabatana akasiyana ekutanga. Kunyangwe ipapo kana pazororo zvaitarisirwa kuti ndinopedza imwe yenguva yangu kutarisa "tsamba" dzinokurumidza uye kudaidza misangano yakakosha. Uye ndakadaro.
Asi vhiki yapfuura iyi ndakatora rwendo rweCaribbean ndikaita chimwe chinhu chandakanga ndisina kuita mumakore gumi nemashanu. Ini ndakanyatsobva grid. Kwete e-mail. Hapana foni. Kwemazuva manomwe nemaawa gumi. Zvaishamisa pakutanga. Asi pane zvese zvaive zvakanaka, kwaive kusunungura. Pamberi pehunyanzvi ndaive nerubatsiro kubva kune-vandaishanda navo vaifukidza chero nyaya dzekukurumidza dzakauya. Pamberi peangu pamberi ndaigara ndichizviwana ndichisvika kune iyo iPhone iyo yakanga isiri muhomwe yangu kuti ndiwane iyo pakarepo ruzivo rweInternet rwandakafunga kuti ndaida. Tekinoroji yangu tether yanga isipo uye mushure mechinguva ndakazojaira. Pakutanga vhiki ino ndanga ndichitaura nebhizinesi rekutaurirana uye ndataura zororo rangu risingafadzi Iye akati dzimwe nguva ane "detox" kupera kwevhiki kwaanotarisa iye "crackberry" zvachose. Iye akati zvaive zvakanaka uye ini ndinobvuma. Edza iyo..unplug..detox..kunakidzwa nechirimo.
Steve anozvitsanangura se "nyika diki, diki-n-roll" seyese teki uye mushambadzi. Akasiya WISH-TV kumashure muna 1995 kuti ave mumwe wevaIndy vekutanga vagadziri vewebhu uye vanachipangamazano. Ari munzira aishandira kutanga kusanganisira iProperty.com, Narrowline, OneCall Internet, Vontoo uye ChaCha anga ari kupi mushandi # 4 uye parizvino ChaCha's Director We Online Advertsing.
Makorokoto pazororo. Ndinofunga dzimwe nguva tinovigwa zvakadzama mumatambudziko atiri kugadzirisa zvekuti hatidzokeri shure. Dzimwe nguva maonero ari kure anoita kuti zvinhu zvinyatsojeka! Mufananidzo wakanaka!
Ndakanakidzwa nekuverenga chinyorwa ichi. Ndinonyatsonzwa kuti wakanakidzwa nezororo rako. Kure kubva komputa, kure nematambudziko ese. Ndinoshuva sei kuti ndiwane zororo rangu nokukurumidza. Parizvino, ndichiri kufanira kupedza rimwe basa.
Mufananidzo wakanaka zvechokwadi!